Home » kiisaska
150t / h warshad dhagaxshiidkana dhexdaada mobile (iron ore)
Tani waa kiiska for 150t / h warshad dhagaxshiidkana dhexdaada mobile (iron ore), haddii aad leedahay shuruud kasta fadlan nala soo xiriir. Waxaan ku siin doonaa xal caadadii ku salaysan baahidaada....
Tani waa kiiska for goobta rakibo line-soo-saarka Gansu, haddii aad leedahay shuruud kasta fadlan nala soo xiriir. Waxaan ku siin doonaa xal caadadii ku salaysan baahidaada....
Tani waa kiiska for 500-800 tan oo line-soo-saarka dhagax, haddii aad leedahay shuruud kasta fadlan nala soo xiriir. Waxaan ku siin doonaa xal caadadii ku salaysan baahidaada....
Tani waa kiiska for Algeria site rakibo warshad wax burburinayay dhagax / h 300 t, haddii aad leedahay shuruud kasta fadlan nala soo xiriir. Waxaan ku siin doonaa xal caadadii ku salaysan baahidaada....
Tani waa kiiska for Papua New Guinea map goobta wax burburinayay mobile, haddii aad leedahay shuruud kasta fadlan nala soo xiriir. Waxaan ku siin doonaa xal caadadii ku salaysan baahidaada....